အဘယ်ကြောင့် YOUTUBE ကိုပေါ်ဗီဒီယိုမကစားပါဘူး - YOUTUBE ကို - 2019
YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုများကစား troubleshoot
အဲဒီမှာကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်အောင်မြင်မှုများဖြစ်ပေါ်ရသောအမျိုးမျိုးသောရောဂါဖြစ်ပွားမှုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒီတချို့အလုပ်လုပ်တဲ့၏လုပျငနျးတွင်ထင်ဟပ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Youtube ကိုဗီဒီယို loaded မဟုတ်ပါဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျထိုပြဿနာများ၏သဘောသဘာဝအာရုံစိုက်, သာထို့နောက်သူကဖြေရှင်းမှရှေးခယျြစရာဘို့အကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါဟာအမှားအနည်းဆုံးမကူညီလိမ့်မည်ဟုထို option ကိုကြိုးစားရန်မဟုတ်, သင်ရင်ဆိုင်နေရသောအရာကိုပြဿနာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့အဓိကဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများကိုစဉ်းစားသူတို့ကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်သင်စိုးရိမ်ကြောင့်တစ်ခုခုကိုရွေးပါနှင့်ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်ရှိသည်။
အောက်ပါနည်းလမ်းများ YouTube ကို hosting တိကျတဲ့ဗီဒီယိုပြဿနာများဖြေရှင်းဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သော Mozilla Firefox ကို, Yandex Browser ကိုသည်အတိုင်း, browser မှာဗီဒီယိုကစားကြပြီမဟုတ်လျှင်, သင်ဤစွမ်းဆောင်မှု plug-in ကိုက်ဘ်ဘရောက်ဇာနှင့်အခြားသူများ၏ဗားရှင်းအဟောင်း၏ပျက်ကွက်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်အခြားဖြေရှင်းနည်းများရွေးချယ်ရန်ကြည့်ရှုပါရန်လိုအပ်သည်။
Opera မှာ YouTube ပေါ်မှာဗွီဒီယိုတစ်ခုမကစားပါဘူး
Method ကို 1: browser setting ကိုပြောင်းပေးပါ
ပထမဦးဆုံးအသငျသညျကိုသူတို့ပျောက်များမှာသို့မဟုတ်မူလကမှားယွင်းနေလျှင်, ထိုသူတို့ဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်းနှင့်အတူဒုက္ခဖြစ်မည်အကြောင်းကြောင့်, settings ကိုနှင့်အော်ပရာ၏မှန်ကန်မှုကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤအမှုကိုပြုသောနိုင်ပါတယ်:
မီနူးကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်အော်ပရာကိုသွား "Settings" ကို.
အဆိုပါအမှတ်အသားများရှိနေကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင် - မီနူးမှာသူတို့ကိုပြန်စီ, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ browser ကို restart ချလိုက်ပါနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ဗီဒီယိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားပါ။
Method ကို 2: Disable လုပ်ထား Turbo Mode ကို
သငျသညျရုပ်ရှင် play ဖို့ကြိုးစားပါလျှင်သင်တစ်ဦးအကြောင်းကြားစာရ "File မတွေ့ရှိ" သို့မဟုတ် "မတင်နိုင် File"သင်က enabled ရှိပါက, ထို့နောက် mode ကိုအဲဒီမှာချွတ် Turbo ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကိုကို turn off, သငျသညျအနညျးငယျကလစ်အတွက်လို့ရတယ်။
သွားပါ "Settings" ကို မီနူးမှတဆင့်သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် Alt + P ကို, ကိုသွားပါ "Browser ကို".
အောက်ခြေဆင်း drop နှင့်ထံမှစစ်ဆေးမှုများကိုဖယ်ရှား "အော်ပရာ Turbo Enable".
ဤအခြေလှမ်းများမကူညီကြဘူးလျှင်, သင်သည်သင်၏ browser ကိုဗားရှင်း refresh ဒါမှမဟုတ် setting များကို plug-ins များကိုစစ်ဆေးနိုင်ရန်ကြိုးစားနိုင်ပါ။
နောက်ထပ်အင်ဖို: Opera မှာဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်းနှင့်အတူပြဿနာများ
ဤပြဿနာကိုလည်းအများဆုံးမကြာခဏတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်အဖြစ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မတလမ်းတည်းဖြင့်, ရှိပါတယ်။
Method ကို 1: Windows7ကို updates များကိုဖယ်ရှားပါ
Youtube ကိုအပေါ်တစ်ဦးသည်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါသာ Windows7ကိုအသုံးပြုသူများသည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်သင်၏ operating system များအတွက် update ကို install လုပ်ထားခဲ့ကြပေမည်ဤပြဿနာထိုပြဿနာနှင့်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်စေ၏။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင် updates များကိုဖယ်ရှားပစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤအမှုကိုပြုသောနိုင်ပါတယ်:
စာနယ်ဇင်းများ "Start" နှင့်ကိုသွား "Control Panel ထဲက".
ကို Select လုပ်ပါ "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ".
တစ်အပိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ "View installed updates များကို" လက်ဝဲ Menu ထဲမှာ။
သင်က KB2735855 နှင့် KB2750841 updates များကို install လုပ်ထားကြသည်ရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့လျှင်, သင်သည်ထိုသူတို့ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
လိုချင်သော update ကိုနှင့်ကလစ်ကို Select လုပ်ပါ "ကိုဖျက်".
အခုတော့ကွန်ပျူတာကို restart နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဗီဒီယို start ကြိုးစားပါ။ အလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်, ဖြေရှင်းချက်၏ဒုတိယမူကွဲမှအပေါ်ကိုရွှေ့။
Method ကို 2: ဗီဒီယိုကဒ်ယာဉ်မောင်းကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
ဒီတစ်ခါလည်းသင်၏ video drivers တွေကိုခေတ်မမီတော့ရှိပါတယ်သို့မဟုတ်သင်ချွတ်ယွင်းဗားရှင်းကို install ပါပြီ။ နောက်ဆုံးပေါ်ဂရပ်ဖစ်ဒရိုင်ဘာရှာတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်သည်သင်၏ဗီဒီယိုကိုကဒ်၏မော်ဒယ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Read more: ဗီဒီယိုကဒ်အတှကျလိုအပျဘာကားမောင်းသူထွက်ရှာမည်
အခုတော့သင်သည်သင်၏ပစ္စည်းကိရိယာများသို့မဟုတ်သင်သင့်လျော်ကိုကူညီရှာဖွေမည်ကိုအထူးအစီအစဉ်များ၏ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူရဲ့ site မှတရားဝင်ယာဉ်မောင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးအွန်လိုင်းနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများ၏အော့ဖ်လိုင်းဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
Method ကို 3: ဗိုင်းရပ်စ်ကကွန်ပျူတာစကင်လုပ်နေ
ဒါဟာမကြာခဏပြဿနာများကူးစက်ပြီးနောက်မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများသို့မဟုတ်အခြား "နတ်ဆိုး" အားဖြင့် PC ကိုစတင်ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စစ်ဆေးသင့်ကွန်ပျူတာကိုပိုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ Avast Free Antivirus, AVG Antivirus ကိုအခမဲ့, McAfee က, Kaspersky Anti-Virus, သို့မဟုတ်အခြား: သင်မဆိုအဆင်ပြေ antivirus ကိုသုံးနိုင်သည်။
သငျသညျလက်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားအစီအစဉ်ကိုမရှိဘူးလျှင်သင်တို့သည်လည်း, အထူးတင်နိုင် utility ကို၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က Anti-virus software ကို "ဖြည့်စွက်" အဖြစ်ကောင်းမကောင်းအစာရှောင်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာအဖြစ်ရေပန်းစားသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။
Read more: antivirus ကိုမပါဘဲဗိုင်းရပ်စ်အဘို့သင့်ကွန်ပျူတာစကင်ဖတ်
အထက်ပါအဘယ်သူအားမျှအလုပ်မလုပ်မပါဘူးဆိုရင်, နှစ်ခုသာရှေးခယျြစရာပြဿနာဖြေရှင်းရှိပါတယ်။ အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူဂျ၌ရှိသကဲ့သို့, သင်ဖြစ်စဉ်ကိုအရေအတွက်ကို3အသုံးပွုနိုငျနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များအဘို့သင့်ကွန်ပျူတာစကင်ဖတ်စစ်ဆေး။ ရလဒ်အပြုသဘောမလျှင်, သင်ပြန်သင်အရာအားလုံးကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည့်အခါအချိန်မှလှိမ့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
system ကို Restore
settings ကိုပြန်သွားနှင့်အရာခပ်သိမ်းကောင်းစွာအထူး Windows ကိုကူညီဖို့ရန်အခွင့်အလမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ရာပြည်နယ်အတွင်းရှိ system ကိုမွမ်းမံပြင်ဆင်ပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်, သင်ရပါမည်:
ကိုသွားပါ "Start" နှင့်ရှေးခယျြ "Control Panel ထဲက".
ကို Select လုပ်ပါ "ပြန်လည်ထူထောင်ရေး".
အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "စနစ်စတင်ခြင်း Restore".
အဓိကအရာ - အရာအားလုံးကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အခါရက်စွဲတစ်ခုရွေးဖို့, စနစ်ကြောင့်အချိန်အပြီးပါပြီသမျှသော updates များကိုပြန်လှိမ့်။ သင် operation system ၏ပိုသစ်သောဗားရှင်းရှိပါကပြန်လည်နာလန်ထူမှုလုပ်ငန်းစဉ်နီးပါးတူညီသည်။ သင်ကတူညီတဲ့အရေးယူလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Windows 8 system ကို restore လုပ်နည်း
ဤရွေ့ကား YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်းနှင့်အတူဖြေရှင်းရာမှာများအတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားများနဲ့ options ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာ trite အသံစခွေငျးငှါသော်လည်းအဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကရိုးရှင်းစွာပြန်လည်စတင်ရန်ကူညီပေးသည်ဟူသောအချက်ကိုမှသတိထားရမှာကျိုးနပ်သည်။ ဘာမှသည် operating system ကိုမဆိုပျက်ကွက်သာရနိုင်ပါသည်။